YAA MAAMULA MAXAYSE U TAAGAN YIHIIN SHABAKADAHA INTERNETKA EE KU SOO BAXA AFKA SOOMAALIGA!!!!!!
Waxaa dhamaaday wadaniyadii, waxaa bedalay qabaliyad, waxaa dhamaaday dal jacayl waxaa bedalay gobalaysi, waxaa dhamaaday ka fakarkii jiilka danbe waxaa bedalay dilka iyo fasahaadinta jiilka maanta, waxaa dhamaatay cadaaladii waxaa bedalay xaqdaro, xin, xasid, xumaan, xaaraan, iyo xasuuq, waxaa dhamaatay sinaantii waxaa bedeshay dabaqado qabiil iyo dhaqaale ku salaysan.
Hadaba akhristow waxaa iswaydiin mudan side intaas oo arimood ku dhaceen sideese lagu bedeli karaa, kaalin intee le’eg ayayse saxaafudu ka qaadan kartaa arintaasi, mase jirtaa in saxaafadu tahay aalada burburiyay dalkeenii iyo qarankeenii.
Waxaa jirta arin aysan muskhtamaca Soomaaliyeed badankiis ku baraarugsanayn ama fahamsanayn taas oo ah kaalinta saxaafada.
Saxaafadu waa shay loo adeegsan karo wanaag laakiin wakhtiyada qaarkood waa shay dhibaatada uu gaysan karaa ayka badan tahay faa’iidadiisa, maxaa yeelay in wax la dhiso waxay qaadataa mudo dheer laakiin burburku ama in wax la burburiyaa waa wax sahlan.
Hadaad dib u eegto saxaafada Soomaliyeed waxay soo martay marxalado kala duwan. Saxaafada ugu wayn oo aan xusuusanahay waa mida uu hodanka ku yahay Afka Soomaaligu oo ah Gabayada, taaso ah sida keliya oo ay kuwada xiriiri jireen ama warka ku kala qaadan jireen dadkii hore. Hadaad dib u eegto dagaaladii qabiilada soomaaleed badankood waxaa hurin jiray Gabay uu qof mariyay (tiriyay) kadibna uu qaaday warside ama fariin qaade gaadhsiiyayna ciday khusayso, cidaasi ama ha noqoto qolada lagu aflagaadaynayo, looguna hanjabayo ama loogu digayee, ama ha noqoto noqalada lagu dhiiri gelinayo, lagu kicinayo ama loogu calaacal iyo cataabayee. Waxaa ka mid ah gabayadaas kuwii caan baxay sida: Silsiladii Guba oo uu Cali Dhuux bilaabay, Gabayadaasina ay saameeyeen Isaaq, Harti iyo Ogaadeen (absame). Rag caan aad ugu ah xaga gabayaduna ay silsiladaas dab iyo fidmo belbeliska ahayd ka qayb qaateen.
Waxaa kaloo jiray Gabaygii uu Aw Muuse Tirshay oo ahaa mid aad u dheer uuna ku kicinayay Majeerteen si loogu duulo Warsangeli oo markaasi dilay niman ergo ahaa, taasi oo ahayd shay laga gilgisho, maxaa yeelay ergada la isku diraa waa la nabadgelin jiray.
Waxaa ka mid ahaa taliskii Sayidka ee guumaysi diidka ahaa waa Daraawiishe iyo sida ay u isticmaali jireen aalada Saxaafada iyadoo uu Sayidku fariimihiisa ku gudbin jiray gabayo una dhiibi jiray warside ama ergay fariintiisa gaarsiiya hadba ciday khusayso, ragii caanka ahaa ee wakhtigaasna waxaa ka mid ahaa, Ismaaciil Mire iyo Cali Dhuux , sidoo kale Xuseen Dhiqle iyo rag kale oo badan.
Waxaa ugu danbeeyay u isticmaalka Aaladaan saxaafadeed ninkii la oran jiray Khaliif Sheikh Maxamuud oo tiriyay gabayo badan oo uu ku kicinayay Majeerteen oo wakhtigaasi mucaarad ku ahaa lana dagaalamayay Taliskii Keligii taliska ahaa ee ina Siyaad bare.
Habada akhristow hadaan u soo noqdo Saxaafada Casrigaan oo ah mida Raadiyaha, Joornaalada, Telefishinka iyo mida ugu danbaysa ee internetka, waxaan oran karaa waa mid ka dhib iyo dheefba badan saxaafadii qarniyadii tegay.
Waxaa kaaga tusaale ah:
Hitler iyo wasiirkiisa warbahiinta oo saxaafada u adeegsadeen kicintii iyo borobogaandadii ay ku hayeen shacabka jarmalka, sidoo kale waxay amarada tooska ah ka siin jireen ciidamadooda iyo taageerayaasha xisbigii Naasiga ahaa, idaacadaha la iskala hadlo, waxay kaloo ku dhiiri geliyeen shacabkii taliskooda hoos imaan jiray inay xasuuqaan yuhuudii ku dhexnoolayd.
Waxaad kaloo arki in Shuuciyadii Ruushku ay dadka ka xukumaysay idaacadaha iyadoo wixii la rabo in shacabka kagu shubo ama laga dhaadhacsho loo adeegsan jiray saxaafada.
Sidoo kale Maraykanku wuxuu burburintii shuuciyada u adeegsaday idaacad loo yaqaan (RADIO FREEDOM) ama cadka xoriyada kaas oo lagula hadli jiray laguna kicin jiray shacabkii Yurubta Bari sida: Romaaniya, Yugoslaafiya, Jeguslaafiya, Bulgaariya iwm.
Ugu danbays xasuuqii ka dhacay Dalka Rwanda waxaa laga hagayay ama laga maamulayay idaacadaha raadiyaha dalkaasi oo waxaaba la oran karaa ragii idaacadahaasi ka hadlayay ayaa ka darnaa kuwii qoriga, seefta iyo faaska (baangada) la dhacayay shacabkii maxaysatada ahaa ee Tutsiga. Xasuuqaasi oo ay ku nafwaayeen 500,000 oo Tutsu ah iyo qaar ka mid ah Hutuda waxgaradka ahaa oo isla noolaanshaha ogolaa wadaniyaduna ku jirtay..
Waa isagii uu Dhoodaan gabaygiisa ku lahaai: (Nin ku dilay ninkii kugu diraa kaaga sii darane).
Hadaba akhristow hadaan u soo noqdo saxaafada maanta iyo aalada internetka, waxaan oran karaa waa alaad aafo ah, waa shaydaan ka dheereeya kan insiga iyo jinigaba, waa aalad adoo gurigaaga jooga aad daafaha iyo cidhifyada aduunka kula xiriiri kartid, waa aalad isku darsatay ama kulansatay sadexdii aaladood ee warbaahineed (maqal “raadiye”, muuqaal “telefishin”, Qoraal “joornaal”).
Waa aalad samo iyo xumoba loo adeegsan karo.
Hadaba waxaa iswaydiin mudan sida ay Soomaalidu u adeegsato aaladaan. Anoo taa tixraacaya ayaan booqday Boggaga kala duwan ee ay soomaalidu maamusho kuna soo baxa Afka-Soomaaliga, waxaan kala kulmayna waa sidaan:
Inay yihiin goobo faafiya gobolaysi iyo qabyaalad.
Yihiin goobo lagu kala taageero dagaal abaabulayaasha iyo dhiigyacabka.
Yihiin goobo ka turjuma aragti hoose iyo nimba aragtida qabiilkiisa ama jifadiisa.
Yihiin goobo wax ku arka il keliya waxna ku maqla dhag keliya.
Yihiin goobo la isgu faano laguna aflagaadeeyo qabiilada kale.
Yihiin goobo lagu soo bandhigo aragtida,maqaalada ninba ninka la qabiilka ah
Yihiin goobo aan ogolay soo bandhig figrad ka duwan tooda.
Yihiin goobo jecel maqaalada belbelka iyo buuqa abuura, diidana kuwa waanada iyo wadaniyada xanbaarsan.
Intaas iyo in kaloo badani waa waxa ay u taagan yihiin goobahaasi, waxaana kaaga markhaatiga:
Magacyada ay la baxeen sida: Puntland, Somaliland, Gedo, Hobyo, Qandala, Galkacayo, Banadir, Hiiraan, Mudug, Galgaduud, Marka, Dayniile, iyo kumanaankaloo badan, waxaaba ka siidaran kuwa sida qaawan qabiilka u sheegtay sida Mudulood, Midgaan iyo Bantu iwm.
Goboladaas iyo Tuulooyinkaas iyo magacyada qabaa’iladaasi waa kuwo u taagan aragtiyo hoose oo kooban oo khaas ah, waa kuwo aan matali Karin shacab Soomaaliyeed, waa kuwo sii kala fogaynaya Wadaniyadadii, Qaranimadii iyo Midnimadii Soomaliyeed, maxaa yeelay shaashadahaan internetka ee Soomaalidu waxay keeneen in qofkastaa uu ka biyo cabo ama warka ka qaato shabakada internetka ee ku hadasha afka qabiilkiisa, wadata magaca gobolkiisa, matasha qabiilkiisa , taasoo cabirta fikirka jifadiisa. Hadaba waxaa iswaydiin mudan miyaysan qabyaalada, gobolaysiga, iyo jifa jifaysigu ahayn wixii burburiyay dalkeenii hooyo , waxa sababay inaynu qaxooni ku ahaano dalal aynaan lahay, hadaba akhristow goormaynu door iyo dawo moodnay jiradii iyo cudurkii ina laayay oo meesha ina dhigay.
Waxaan iswaydiiyaa sidii lagu heli lahaa internet ku hadli kara Magaca Soomaaliyeed, matali kara mushtamaca iyo qowmiyada Soomaaliyeed, kaas oo ka hufan aragtida hoose ee qabyaalada ku salaysan, sidii lagu heli lahaa goob uu qofkastoo damiir soomaalinimo iyo dal jacayl ku jiri ka heli karo warka, sidii loo heli lahaa il saafi ah oo laga cabi karo biyo xareed ah oo aan la barxin lana buunbuuni.
Ma lihi way xun yihiin dhamaan qolalka ku hadla Afka Soomaaligu ama ay Soomaali maamusho, laakiin waxaan leeyahay badankood ashmaaha, oo timir laf baa ku jirta.
Hadaba waxaa in la fahmo u baahan in qofkastoo furanaya ama maamula shabakad warside ah ee internetku uu fahmo mabaadida iyo xeerarka wariye nimom, maxaa yeelay wuxuu soo bandhigayaa qofkaasi war, aragtiyo, doodo, iyo faalooyin. Qofkastoo guriga kumbuyuutar u yaalana wuu akhristan, hadaba ogow qofka kastoo akhrisanaya shabakadaadu inuusan kula jifo iyo qabiil ahayn , sidoo kale waxaaba dhici karta inuusan kula diin, af iyo dalba ahayn. Marka waa xilwayne ogow.
Soomaalidu waxay tiriihdaa “nin walba ceesaantiisa ceelka keen” marka arinku yuusan noqon ina hebel ama reer hebelba gole iyo shaashad bay samaysteene maxaa aniga reer hebela inoo diiday, ogow caqliyadaada kooban iyo sirtaada hoose intaba in laga ogaan karo qormooyinka iyo maqaalada aad soo bandhigaysid.
Ugu danbays si bal aynu wax uga fahamno xeerarka iyo xirfadaha saxaafada, fadlan la soco qormadayda danbe oo aan kaga hadli doono waajibka saaran Suxufiga iyo waxa laga rabo Saxaafadu inay noqoto.